Fitantanan’ny Roandey nandritra ny valanaretina: Fotoanan’ny fandinihantena izao · Global Voices teny Malagasy
Hanimba ny lasitra fitantanany ny tsy fahazakan'ny fitondrana Roandey fanakianana
Voadika ny 04 Janoary 2021 15:23 GMT
Haingana be sy nahomby ny valinkafatr'i Roandà tamin'ilay valanaretina, niaraka tamin'ity fitaovana fanasàna tànana eo amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana ao Kigali ity, tamin'ny tapaky ny Martsa. Sary an'i Cyril Ndegeya, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Tao amin'ny bilaogin'ny Friedrich Ebert Stiftung ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany ary nahazoana alànana ny famerenana mamoaka azy rehefa avy nasiana fanovàna kely.
Taorian'ny fanondroan'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamàna an'ilay coronavirus hoe valanaretina, i Roandà no firenena voalohany indrindra tao Afrika niditra tamin'ny fihibohana. Ny 23 Martsa, namoaka didy hanaovana fihibohana tanteraka ny governemanta, nametraka fepetra henjana amin'ny fivezivezena ary nanakatona ireo anjerimanontolo mba hampihena ny fiparitahan'ny viriosy tao amin'ny firenena. Nanomboka teo, 7.970 ireo tranga COVID-19 voamarina, ka 74 no maty ary 6.289 no sitrana tao Roandà, hoy ny Anjerimanontolo Johns Hopkins.
Ny lasitra fitantanana tao Roandà dia niorina teo ambonina fitantaràna roa nifaninana: tetsy ankilany ny tantaran'ny maha”malala-tànana mahatehotia,” ohatry ny fandrosoana mahomby ao Afrika no itazanana ilay firenena. Firenena iray tsy refesimandidy ihany koa izy, mifototra amin'ny tanjaka ara-toekarena sy ara-politika mivangongo eo an-tanan'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny Rwandan Patriotic Front, izay mifehy ireo fitaovam-piarovana rehetra eo amin'ny fanjakana sy tompon'ireo orinasa vaventy ao amin'ny firenena. Nanangana ny maha-mamimbahoaka azy teo ambonin'ny firoboroboana ara-toekarena malaky tao amin'ny firenena io lasitra fitantanana io.
Rariny ny an'ireo sasany mpikirakira vaovao pôlitika mihevitra ny fampiasàna ny fiparitahan'ilay valanaretina ho toy ny mari-pandrefesana hijerena ny natiora sy ny kalitaon'ireo andrimpanjakana eo amintsika. Ary ny teboka fiaingàna mibaribary dia ny fandinihana ireo tanjaka sy halemen'ny fitaovam-panjakana, ary ny fomba entin'ny fitondrana mamaly ny filan'ny vahoaka.
Fotoana fohy taorian'ny nanambaran'ny governemanta ny fihibohana manerana ny firenena, nàka ny media sôsialy ny vahoaka, — indrindra ireo Roandey tao amin'ny Twitter (nopetahana anarana hoe RWoT) —nanainga ny governemanta mba hanome vonjy taitra ho an'ireo fianakaviana tena marefo ary hametraka haingana fepetra ara-toekarena hanentsenana ny banga araka izay tratra.
Ho tonga any aminireo mahatra voan'ny #COVID19 ve io fanampiana mitentina 12 tapitrisa dolara amerikàna avy amin'ny ADEPR io? Sa hozarazaraina amin'ireo mponina am-bohitra & Mutwarasibo ( lehibe-na vondrompiarahamonina) toy ny nisy nandritra ilay olana farany saika nanerana ny tao @Gasabo_District ? Inona no tsy ampy amin'io fandaharanasa io? @ashyaka
Zavadehibe ny famantarana ny toejavatra nasiônaly. Tsy fahita firy izany Roandey manakiana imasombahoaka ny fitondrana izany— indrindra fa ety anaty tambajotra sôsialy —noho ny tsy fahavitàn'ny governemanta amin'izao fotoana izao mandefitra amin'ny fanakianana atao azy. Mazana, matahotra haneho ny ahiahiny ny vahoaka noho ny famoretana ataon'ny fanjakana sy ny fampiasàny ny fahefany tsy refesimandidy mba hitazonana ny fifehezana.
Rehefa nanomboka tao Roandà ilay valanaretina, betsaka no tonga hatrany amin'ny fitakiana hisian'ny mangarahara kokoa avy amin'ny governemanta momba ny fitantanana ny tahirim-pirenena Agaciro Fund (agaciro midika hoe “mendrika” amin'ny fiteny Kinyarwanda). Notakian'ireo olompirenena tamin'ny governemanta ihany koa ny antony tsy mbola nanapahany hevitra hampiasa ampahany tamin'ireo tahiriny manokana mba ho entina hanalefahana ny fiantraika ara-tsôsialy sy ara-toekarenan ‘ity krizy ity, fa tsy nanontany ny Banky Iraisampirenena na ny Tahirimbola Iraisampirenena momba izay fampindramambola na drafi-panavotana.
Noho ny fihibohana nandritra ny 6 herinandro tao #Rwanda vokatry ny valanaretina #Covid19, tena maika be ny filàna famatsiana sakafo an'ireo mahantra sy tena mila izany. Ezahan'ny Solace Ministries ny manohana ireo mpandary tombontsoa ao aminy amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-tsakafo. Raha hizaha bebe kokoa, tsidiho ny https://t.co/BsoqoXcodp. #communitysupport pic.twitter.com/JKRxJT3nET
— Aderemi Banjoko (@AderemiBanjoko) 13 May 2020
Avy any ivelany no naka aingam-panahy ry zareo mponina ao, tamin'ny fomba niatrehan'ny firenena hafa ny fiantraika ara-toekarena naterak'ity krizy ity. Ankoatra izany, tena zavadehibe ny mahatakatra ny fifohazana tampok'ireo olompirenena tao, indrindra fa tao anatin'ny toejavatra misy ny firenena iray izay ny fijery ofisialin'ny governemanta no mibahana eny anatin'ny fampahalalambaovao ao an-toerana, miaraka amin'ny fahalalahana maneho hevitra voafefifefy, ampivadiana amin'ny fiarahamonina sivily marefo dia marefo.
Na nihodinkodina teo amin'ny 7 isanjato teo aza nandritra ny taompolo farany ny harinkarena faobe tao amin'ny firenena, mijanona ho mahantra, tsy an'asa ary sahirana ara-bola ny ankamaroan'ireo Roandey, ny tanora sy ireo tsy nandia fianarana no ankamaroany. Vokany, hita mitombo be sy matanjaka ny fanehoana hasosorana eny amin'ireo olompirenena—indrindra fa any an-tanandehibe—manoloana ireo kabary ofisialy momba ny fandrosoan'ny firenena sy ny firoboroboana ara-tsôsialy ara-toekarena.
Mandritra izany fotoana izany, ireo firenena mpifanolo-bodirindrina ary mpikambana ao amin'ny East African Community (EAC) toa an'i Kenya dia efa nanambara sahady ireo drafitra ho entina manosika ny toekarena ho entina miatrika ny fiantraika mamoadozan'ny fiparitahan'ilay valanaretina coronavirus. Ogandà, koa, dia efa nangataka sahady fanampiana tetibola fanampiny mitentina 284 miliara shillings ogandey (eo amin'ny $75 tapitrisa dolara amerikàna) ho entina miady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 sy ny ho fiantraikany. Roandà indray etsy andaniny, nanambara tetikady iray ho fanalefahana ny toekarena mba hanampiana ireo fandraharahàna sy ny sehatra tsy mainkina amin'ny fiatrehana ny fiantraika ara-toekarenan'ity krizy ity, na mbola tsy nampahafantarina ny daholobe aza ny antsipirihan'io drafitra io, ary volana sivy aty aoriana, mbola tsy nandray na vary iray venty tamin'izany aza ny sehatra tsy miankina.
Volana maro taorian'ny nampiharana ny fanapahankevitra hanao fihibohana, tsy nasian'ny governemanta resaka ny fitakian'ny vahoaka momba ny fanampiana ara-tsakafo. Nipongatra ireo resabe teny anatin'ny media sôsialy nihevitra hoe zara raha nanome fanampiana na tsy niraharaha velively ireo fianakaviana mahantra ry zareo manampahefana.
Nabaribarin'ity krizy ity ny fifandroritana ara-politika tsy mitsahatra mitombo ao anivon'ny governemanta, raha jerena ny fandroahana tamin'ny Aprily ny minisitry ny atitany sy ny filaminana, Jeneraly Patrick Nyamvumba, ary ny minisi-panjakana tao amin'ny ministeran'ny raharaha ivelany sy ny fiarahamiasan'ny Afrika Atsinanana, ny ambasadaoro Olivier Nduhungirehe. Toa tahaka ny sary maneho ny tsy fisian'ny tetikady mazavan'ny governemanta hiatrehana ity krizy ity io korontana io. Amin'ny fomba ofisialy, noroahana ireo minisitra roa noho izy ireo nandainga tamin'ny filoha, nanao rainazy ary noho izy ireo tsy mitsahatra ny tsy manao afa-tsy izay saim-pantany fa tsy mametraka ny politika nasiônaly eo ampanatontosana ny andraikiny tandrify azy tsirairay.
Androany, toa tsinjo fa tamin'ny alàlan'ity valanaretina ity, montsana ilay anganongano momba ny firenena iray mahay mandamina sy mahomby.
Miaraka amin'ity vanalaretina ity, mipetraka ny fanontaniana momba ny fahamatorana sy ny maha-mamimbahoaka ilay lasitra fitantanana tao Roandà. Mahomby sa tsia hanafoanana ny tsy fitoviana sôsialy sy ny fifandirana ve ny lasitra fampandrosoana tsy refesimandidy? Na eo aza ny fanjakazakàny, mbola marefo ihany ny lasitra pôlitika misy ankehitriny.
Raha ny hasosorana tsy mitsahatra mitombo eny anivon'ny vahoaka izay efa miaritra fahasahiranana, tsy fananana asa ary fahantrana no sainina, mazava fa mety hampangozohozo sy tsy haha-ela velona ny lasitra napetraky ny fanjakana ny tsy fahazakàny fanakianana.
Mbola haharitra am-bolana maro vao hiseho ny fiantraika miteraka fikorontanana tanteraka avy amin'ny krizin'ny coronavirus, raha tsy ho an-taonany mihitsy aza. Mandritra izay fotoana izay, ho an'ireo Roandey miasa loha sy mitebiteby vokatr'izany rehetra izany, dia mety ny hieritreretana momba izay mety ho fiovàna tsaratsara kokoa entin'io fiparitahana io eo amin'ny fiarahamonina Roandey